China Metal chikamu dhizaini Mugadziri uye Mutengesi | Mestech
Simbi simbi dhizaini inosanganisira iyo tsananguro yechimiro chechimiro, dhayamita, kunyatsoita pamusoro uye yakazara meya zvivakwa, uye pakupedzisira kubuda mifananidzo yekupedzisira chikamu kugadzira.
Simbi simbi dzinoshandiswa zvakanyanya mumaindasitiri akasiyana siyana. Simbi simbi dhizaini ndiyo sosi yezvikamu zvesimbi hupenyu. Mestech inopa mhando dzese dzese dzakatsetseka simbi zvikamu kugadzira, yechigadziri kugadzirisa uye kugadzirisa kugadzirisa kwekutaurirana michina, mhepo simba zvishandiso, zvekurapa zvekushandisa uye zvemagetsi zvigadzirwa.
Izvo zvemuviri uye zvemakemikari zvivakwa, saizi, chimiro, mashandisiro enzvimbo uye mashandisirwo ezvikamu zvakasiyana zvesimbi zvese zvinosanganisa uye zvakasiyana, uye yavo yekugadzira tekinoroji zvakare yakawanda kwazvo.
Kuti tiite basa rakanaka mukugadzirwa kwesimbi, pane zvinhu zvitatu zvakakosha zvatinofanira kujekesa.
Nharaunda yekushandisa yezvikamu uye izvo zvinodikanwa zvezvikamu
(1). Kukura zvinodiwa
(2). Kuoma zvinodiwa
(3). Surface kunyatso
(4). Anti ngura zvinodiwa
(5). Simba rinodikanwa
(6). Rigidity zvinodiwa
(7). Magetsi uye kupisa kwemagetsi zvinodikanwa
(8). Kurema zvinodiwa
(9). Ductility zvinodiwa
Injiniya ari kugadzira
2. Sarudza zvakanaka zvinhu nenzira
Nheyo dzekusarudza zvinhu zvekugadzira zvikamu zvesimbi zvinotevera:
(1). sangana nekushandisa mashandiro: izvo zvinhu zvinofanirwa kukwanisa kugadzirisa dhizaini yesimba, kuomarara, kuomarara, kuitisa uye zvimwe zviratidzo.
(2) Yakanaka yekugadzirisa mashandiro: nyore kugadzirisa uye kugadzikana kugadzirwa, kuve nechokwadi chepamusoro kupasa chiyero, uye kuzadzisa dhizaini dhizaini yekuita chaiyo uye kuita zvinodiwa.
(3) Economy: inogona kuona yakakura-yekugadzira kugadzirwa nemutengo wakaderera.
Plain inobereka uye inobereka nechigadziko
Tichifunga nezvekugadziriswa kwetekinoroji zvinodikanwa zvezvikamu, ndiko kuti, zvikamu dhizaini inofanirwa kufunga nezve inoenderana yekugadzirisa tekinoroji kuverengera kunodiwa kuita uye kunyatsoita, maitiro ekuderedza kunetseka kwekugadzirisa, mutengo uye nekuvandudza kugadzirwa.
(1) Kugadzira: yezvikamu zvine yakasimba michina zvivakwa (simba, kuomarara) uye chiyero chakaringana uye kugadzikana, senge magiya, crankshafts, mabheyaringi uye zvimwe zvikamu zvekutumira zvemuchina maturusi kana michina yekuvaka, simbi kana alloy alloy inowanzo sarudzwa. The machine nzira iri zvemaziso nokuveza.
(2). stamping: yezvikamu zvidiki zveplate, senge midziyo, makomba, mwenje yemwenje kana zvidimbu zvemashiti, sheet sheet kana stamping inowanzo shandiswa. Iyo chaiyo yeiyi tekinoroji yekugadzirisa yakaderera pane iya yekucheka, saka zvimwe zvikamu zvine chaiyo zvinodiwa zvinoda kugadzirwa.
(3) Kufa uchikanda: kune zvimwe zvikamu zvine chimiro chakaomarara, kunyanya isina-ferrous simbi zvikamu, senge injini goko, redhiyeta uye chinobata mwenje chakagadzirwa nealuminium alloy, zinc alloy, magnesium alloy uye mhangura chiwanikwa, kufa kukanda kuumbwa kunogona kuponesa zvakanyanya yekucheka huwandu uye uwane yakakwira kugadzirwa chiyero. Inokodzera kugadzirwa kwemazhinji.
(4) Imwe yekugadzirisa tekinoroji: simbi extrusion inokodzera kugadzirwa kwemazhinji esimbi profiles neyakagara muchinjikwa chikamu, uye hupfu sintering inoshandiswa mukugadzira kwakawanda kwesimbi dzesimbi zvikamu.
Mestech inopa vatengi neOEM dhizaini uye kugadzirisa kwesimbi zvikamu. Kana iwe uine chero chaunoda kana uchida rumwe ruzivo, ndapota taura nesu.
Pashure: Chipurasitiki chigadzirwa dhizaini
Zvadaro: Simbi yekudonha kuumbwa
Simbi yekudonha kuumbwa
Video bhero repurasitiki yakakomberedzwa jekiseni kuumbwa